Japana: Vehivavy maro adala amin’ny sarivongan’i Boddha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2018 5:08 GMT
(Marihina fa tamin'ny 7 Oktobra 2009 no nivoaka voalohany ny lahatsoratra teny Anglisy)
Antsoina hoe ‘Buddha girls’ (仏女butsujo ) (mpankafy Buddha) ry zareo, tanoravavy Japoney eo anelanelan'ny telopolo sy efapolo taona, liana amin'ny fitsidihana ny tempoly sy mankafy ny sarivongan'i Boddha sy Bodhisattva.
Ny ‘Buddha girls’, izay antsoina ihany koa hoe ‘Buddha statue girls’ (mpankafy sarivongan'i Boddha) dia mifanakalo sy mifanolotra hevitra momba ireo toerana tsara indrindra mba hahitana sarivongana hazo na fampiratiana izay mampahafantatra ny zavakanto Bodista manerana ny firenena. Matetika izy ireo no tena liana amin'ny tantara antsipiriany momba ny moanina sy ireo asasoratra masina.
Sary avy amin'i MR+G tao amin'ny Flickr
Manome fanazavana tsotsotra momba ny atao hoe ‘vondrona mpankafy ny sarivongan'i Boddha’ na ‘mpankafy Boddha’ i mikli .
Herintaona izao no naha-“vondrona mpankafy ny sarivongan'i Boddha” ahy. Ny “Buddha Statue Girl” dia tsy zazavavy mitovy amin'ny sarivongan'i Boddha akory. Raha fehezina, tovovavy iray latsa-pitia amin'ny sarivongan'i Boddha no resaka eto. Maniry ny ho Bodhisattva aho atsy ho atsy fa tsy ho Tathagata. Mikolokolo ny tenako aho sy ny bika aman'endriko, ary navelako ho lava ny voloko vao haingana. Te hitovy amin'ny bodhisattva aho.
Nalaza teo amin'ireo namako tato anatin'ny taona vitsy ny ‘Buddha Statue boom’ (fankafizana ny sarivongan'i Boddha), fa ahoana kosa ny amin'ireo hafa? !!
Vao haingana no nampiasaina ny teny vaovao “Buddha statue girl”, noho izany dia heveriko fa izany no lamaody vaovao. Andao, ho lazaina hoe izay.
Nanontany tena i Rentaro raha anisan'ny sokajin'ny “vondrona mpankafy Boddha” izy na tokony heverina ho toy izany, satria mankasitraka ny fombafomba mifandraika amin'ny kolotsaina bodista izy.
Tena vondrona mpankafy Boddha tokoa ve aho … angamba
Raha vao mandre ny emboka manitra aho dia mahatsiaro ho tony
Ary hatramin'ny nanapahako hevitra, vao haingana hianatra sora-kaliana
satria ratsy soratra aho dia nihamaivana ny foko
ary tsy nijanona intsony aho
Oh, kanefa tsy manam-pahaizana momba ny sarivongan'i Ashura ohatra aho
Tsy fantatro akory ireo moanina malaza izay matetika no miseho
any amin'ny bokim-pampianarana
Na dia izany aza, liana amin'ny goshuin [litera ofisialy mitondra ny tombokase shogun] aho ary tiako ny mitsidika ireo tempoly.
Maneho ny Bodisma ireo teny vitsivitsy ireo, kanefa midika ve izany fa mpanaraka ny fivavahana aho?
Tsy manohitra ity fivavahana ity aho saingy lazaiko kosa fa karazana fividianana ny vokatra Boddista na famakiana ny sutra izany. Na izany aza, mety hiteraka olana ho an'ny moanina izany any amin'ny tempoly, sa tsy izany? Na hoe tena fahafahana tsara hanaparitahana ny teny hoe Bodista ihany koa.
Fa nahoana io anarana io? Butsujo? sa nyo?
Iza no namorona azy?!
Sary avy amin'i papadont tao amin'ny Flickr
Nanoro hevitra ireo tanora mpankafy Boddha ny toerana misy ireo tempoly sy ny sarivongana ao amin'ny firenena tsara indrindra ny tranonkala Buddha-girl izay tantanan'ny Hirose Ikumi (廣瀬郁実), telopolo taona , malaza hatrany hatrany eo amin'io tontolo io.
Ny tempoly Daikoji (醍醐寺) sy ny sarivongan'i Yakushi Nyorai (薬師如来) tany Kyoto no soso-kevitra ho amin'ny volana Oktobra.
Any amin'ny toerana maro, ny fararano no fotoana fanokafana manokana ny [tempoly] izay efa nanomboka, toy ny an'ny tempoly Daikoji. Ao amin'ny tempolin'i Reihokan, izay misokatra ho an'ny besinimaro indroa isan-taona ihany, afaka mahita ny sarivongana tsara tarehin'i Yakushi ny mpitsidika! Tamin'izaho mbola mpianatra tany amin'ny oniversite dia indray mandeha ihany no nihaona taminy tao amin'ny mozea iray, saingy nanohina ahy mafy NY endriny mahery sy mendrika. Nanoloana AZY indray aho taty aoriana nandritra ny fampiratiana ho an'ny besinimaro ary tsapako indray … fa tena mahavariana tokoa IZY!
Fahasalamàna 13 ora izay